Asɛmpa Wɔ Hɔ Ma Adesamma Nyinaa, Asɛmpa a Ɛfa Yesu Ho
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luo Malagasy Maltese Myanmar Ngabere Norwegian Nzema Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zulu
Asɛmpa Wɔ Hɔ Ma Adesamma Nyinaa
Yesu wusɔre no maa n’asuafo no gyidi ne wɔn ahokeka yɛɛ kɛse. Ɔsomafo Paulo sei, otutuu akwan kɔɔ Asia Kumaa ne Mediterranea nyinaa. Ɔhyehyɛɛ asafo ahorow hyɛɛ Kristofo no den ma wogyinaa ɔbrasɛe ne ɔtaa a na ɛyɛ hu ano. Ɔhaw yi nyinaa akyi no, Kristosom nyaa nkɔso na ɛtrɛwee.
Paulo koraa, wɔde no too afiase. Nanso, ɔwɔ hɔ mpo ɔkyerɛw nkrataa kɔhyɛɛ Kristofo asafo ahorow nkuran tuu wɔn fo. Ade biako a na ɛsɛ sɛ Kristofo hwɛ wɔn ho yiye wɔ ho paa ne awaefo, na Paulo bɔɔ wɔn kɔkɔ wɔ ho. Onyankopɔn de ne honhom kronkron kaa Paulo ma ɔka too hɔ sɛ “mpataku bɔne” a wɔbɛkasa “akyinkyim nsɛm” bɛhyɛn asafo no mu, na wɔbɛtwe “asuafo no adi wɔn akyi.”—Asomafo Nnwuma 20:29, 30.
Ansa na asomafo no refi hɔ no, na ɔwae no ahyɛ ase dedaw. Emu hɔ baabi na Yesu a wɔanyan no no de Adiyisɛm no maa ɔsomafo Yohane wɔ sɛnkyerɛnne mu de kyerɛɛ nneɛma a ɛbɛba daakye. Sɛnea Yohane kyerɛwee saa bere no, na atamfo ne atoro akyerɛkyerɛfo nyinaa rentumi nsiw Onyankopɔn atirimpɔw kwan; ɔkwan biara so no, na n’atirimpɔw a ɛfa asase ne nnipa ho no bɛba mu. “Aman ne mmusuakuw ne kasa ne nkurɔfo nyinaa” bɛte Onyankopɔn Ahenni ho asɛmpa no. (Adiyisɛm 14:6) Asase bɛdan Paradise, na obiara a ɔpɛ sɛ ɔyɛ Onyankopɔn apɛde no, obetumi anya hɔ atena!
Wunhu sɛ saa asɛm yi yɛ “asɛmpa”? Sɛ saa a, ɛnde sua Bible no na hu asɛm a Onyankopɔn wɔ ma nnipa ne sɛnea ebetumi aboa wo nnɛ ne daakye.
Wo ara wubetumi akenkan Bible wɔ Intanɛt so wɔ www.jw.org. Sɛ wokɔ Intanɛt dwumadibea hɔ a, wubetumi akenkan nhoma ahorow yi nso wɔ hɔ: Asɛmpa a Efi Onyankopɔn Hɔ! ne Dɛn na Bible Kyerɛkyerɛ Ankasa? Wubetumi nso akenkan nhoma afoforo wɔ hɔ; ne nyinaa kyerɛkyerɛ sɛ yebetumi de yɛn ho ato Bible so na yɛde emu nsɛm no ayɛ adwuma wɔ yɛn abusua mu de abɔ yɛn bra. Wopɛ a, wubetumi ama Yehowa Adansefo ama wo nkyerɛkyerɛmu pii.
—Nsɛm yi fi Asomafo Nnwuma, Efesofo, Filipifo, Kolosefo, Filemon, 1 Yohane, Adiyisɛm.